सुक्खायाममा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौ | नेपाल प्रवासी तामाङ समाज कतार
सुक्खायाममा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौ
१४ कात्तिक देखि काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाउन सक्रिय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनबाटै यस्तो सम्भव भएको हो ।’
उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएकै हो त ?
अहिले उपत्यकामा लोडसेडिङ छैन । अन्त्य भनेर घोषणा गरिएको छैन । घोषणा गरिरहनु पनि पर्दैन ।
यस्तो कसरी सम्भव भयो ?
विद्युत् आपूर्ति, पूर्वाधार, सञ्चालन विधि र मागमा व्यवस्थापन गरिएकै कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो । विद्युत् बढी खपत हुने साँझको समयमा उद्योगहरूको लाइन काटिदिएर व्यवस्थापन गरिएकै कारण उपभोक्ताले २४ सै घण्टा विद्युत् पाएका हुन् ।
यो विधिले देशभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिंदैन ?
अहिले नै त सकिंदैन । काठमाडौंका ग्राहकलाई लोडसेडिङ अन्त्यको आभास गराएपछि यो अभियान अन्य ठाउँमा पनि विस्तार हुन्छ । उपत्यकाबाहिरका मुख्य शहरहरूमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने काममा जुटेका छौं । हाम्रो मुख्य लक्ष्य सुक्खायाममा हुने लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने हो ।
इन्भर्टर र जेनेरेटरका व्यापारीले काम नगर्न दबाब त दिएनन् ?
त्यस्तो स्वार्थ समूह लागेको हुन सक्छ । तर, अहिलेसम्म कुनै किसिमको दबाब आएको छैन । बरु लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि कतिपय मान्छेले ‘यसले कुलेखानी डुबाउने भयो’ भनेर प्रचारबाजी गरेका छन् । मलाई त्यस्ता गतिविधिले फरक पार्दैैन ।
सरकार परिवर्तनसँगै तपाइँको पनि प्राधिकरणबाट सरुवा होला, अनि फेरि लोडसेडिङ दोहोरिएला ?
त्यस्तो नहोला । फेरि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा म एक्लैले गरेको पनि होइन, प्राधिकरणको टीमले गरेको हो । नयाँ कार्यकारी निर्देशकलाई नयाँ काम गरेर देखाउने दबाब पर्छ । त्यसैले पनि नयाँ मान्छेले हामीले थालेको काम नियमित गर्लान् । @ हिमालखबर |